Router ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော Cisco DPC2425 (အဓိပ္ပါယ်) Linux မှ
Router ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော Cisco DPC2425 (အဓိပ္ပါယ်)
@Jlcmux | | ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
သငျသညျအခြို့ပြီးသားငါ့အ Router ကိုသိကြလိမ့်မည်။ မလိုက်နာသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုတင်ပြသည်
ဒီကောင်လေးကသူ့ configuration page ကို ၀ င်တဲ့အခါပြproblemsနာအတော်များများကိုလုပ်မိသွားတယ်။ အထူးသဖြင့်ငါ့မှာရှိတဲ့ ISP ရှိတယ်။ (Claro - ကိုလံဘီယာ) ၎င်းသည် ၀ င်ရောက်မှုအားလုံးကိုကန့်သတ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဤ router သည်ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုယူဆောင်လာသည်။ (ကွက်လပ်နှစ်ခုလုံးကိုကွက်လပ်ချန်ထားပါ) သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အော်ပရေတာနှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ဗဟိုနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်အဖြေရှာမတွေ့ပါ။
ပုံမှန်အတိုင်း ... ကျွန်ုပ်၏ဘယ် router ကိုသုံးရန် password နှင့်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အပ်နှံခဲ့သည်။ (ငါအရင်ကစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Firmware update တစ်ခုကငါ့ကို access မလုပ်တော့ဘဲကျန် access ကိုအရင်ချိတ်ထားခြင်း) ရှိသည်။ ရွေးချယ်မှုအများစုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားဝှက်ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင်။
ဒီစကားဝှက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုလုံးဝဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပေမဲ့အမှားကကွဲပြားတယ်။ တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည့်အလားဖြစ်သည်။
စကားဝှက်မှာ Uq-4GIt3M (အသုံးပြုသူ "admin" နှင့်)
ဤအမှားသည်ဂန္ထဝင်အမှားနှင့်အလွန်ကွာခြားသည် - မမှန်ကန်သောသုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်။
ငါအရာများစွာကိုကြိုးစားစတင်ခဲ့ပြီးအဆုံး၌ငါစတင်စဉ်းစား: «အကယ်၍ router သည်အတွင်းပိုင်းရှိ LAN IP များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားလျှင်၊ (တစ်ခုတည်းသော LAN IP ကိုသုံးခွင့်ပြုသည့် UNE routers များနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ )
ရှင်းလင်းသော။! က PROXY! ဒီအတွက် Tor Pro ကို Web Proxy ဖြင့်သုံးပြီးမည်သူမဆိုတကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆင့်များအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သင်၏ WAN IP ကို ​​proxy မှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ (linux တွင် IP ကိုကြည့်ရန်: ဆံပင်ကောက်ကောက် ifconfig.me ) ဒါမှမဟုတ် "what is my ip" အစရှိသည့်ဤစာမျက်နှာများကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့က port 8080 ထည့်သည်
ဒါဟာသင့်ကို username နှင့် password ကိုတောင်းသည်။
Usuario: admin ရဲ့
WIN ။ !!!
၎င်းသည်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးပြaနာဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ၄ င်း၏ router ကိုအဝေးကနေကြည့်ပြီးသူတို့လိုချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ LITERALLY
မည်သူမဆိုပုံမှန်အတိုင်းစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ဟုထင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်သည်။ ကောင်းပြီ, ငါကြိုးစားခဲ့သူသူက "ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ " ပြောင်းလဲသွားတယ်ကပြောပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘာမှမလုပ်ဘူး
ဒီတော့ဝေးလံခေါင်ဖျား access ကိုပိတ်ဆို့ကြကုန်အံ့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာအားပိတ်ထားသည်။ အဝေးမှ Config စီမံခန့်ခွဲမှု
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » Router ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော Cisco DPC2425 (အဓိပ္ပါယ်)
Compadre၊ သင်၏စာလုံးပေါင်းကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားအကြံပေးသည့်ဆောင်းပါးကိုမထုတ်ဝေမီ၎င်းသည်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် Router ကိုပြုပြင်မွမ်းမံထားသော firmware နှင့် ပိုမို၍ ပွေ့ဖက်နေသော OpenWRT သို့မဟုတ် DD-WRT ။
သူပြောနေသည့် router သည်အင်တာနက်ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။ အပြင်မှာဝယ်ထားတဲ့သူအတွက်လဲလှယ်လို့မရပါဘူး ကံကောင်းထောက်မစွာသင်ကပြုပြင်ထားသော firmware ကိုထည့်သွင်းရန်စီမံခဲ့လျှင်သင်အော့ဖ်လိုင်းတွင်ရှိနေပြီး Claro Colombia သည်အသစ်တစ်ခုအတွက်သင့်အားအားသွင်းလိမ့်မည်။
ဒါကဖြစ်ပျက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်အဲဒီအကြောင်းမသိဘူး၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စတိုးဆိုင်ထဲရှိ router တစ်လုံးကို ၀ ယ်ပြီး၎င်းကို device ၏ eth ports တစ်ခုထဲကိုထည့်ပြီး ISP ကိုမေးနိူင်သည်။ အဲဒါကို WiFi function ကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုမလိုချင်လို့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် TP-Link router ကို Wi-Fi နှင့်အသုံးပြုသည်။ ကြမ်းပြင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်ပထမနေရာ၌ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကို Wi-Fi အင်တင်နာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကိုအင်အားသုံးစရာမလိုဘဲ၎င်းကိုအလွန်အမင်းမပျက်စီးစေရန်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ USB Wi-Fi အင်တင်နာကိုချွေတာလိမ့်မည်။
စူပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ ISP ကိုကြည့်ပါက WiFi ကိုခဏ disable လုပ်သည့် bullshit ကိုလုပ်သည်။ Cisco-Linksys ကို DD-WRT နှင့်အငြိမ်းစားယူပြီး TP-Link ကို ၀ ယ်လိုက်သည်။ တူညီသောပြproblemနာ, Cisco သည်ယခု the ည့်ခန်းရှိ TV ကိုထပ်မံထုတ်လွှင့်သောအရာ ဖြစ်၍၊ ဖန်စီနေသည်။
သူတို့ကအဲဒါကိုပိတ်ထားဘူး ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အရမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ငါလုပ်ခဲ့တာကသူတို့ WPA2 ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် (သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့် WEP ထဲကိုရောက်လာတယ်) ။ ပြီးတော့ငါစကားဝှက်ကောင်းတစ်ခုထားလိုက်တယ်။ နောက်ကျွန်တော်က router ကအင်တာနာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဟာကိုယ်ပိုင် router အလယ်မှာရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းကိုပေးရမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုပေးပြီးသင်မထိန်းချုပ်နိုင်တာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
ကောင်းပြီ jho / & / & %% & ဤတိုင်းပြည်များ၌ထိုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းမှာ ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။ WEP ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သာမန်ထက်ပိုဆိုးသည်။ Mac hahahaha ကိုသုံးသောမထင်မှတ်သောသူများအတွက်သူတို့လုပ်ပေးသည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်၎င်းသည်မည်သို့မည်ပုံမသိကြောင်း ကောင်းစွာ router ကို configure လုပ်ဖို့, အရှက်ကွဲခြင်း။
လွယ်လွယ်ကူကူ - အကယ်၍ သင်၏ router မှာ MAC address filtering ရှိရင်သင်၏ PC နှင့်အခြားမည်သည့် Wi-Fi စက်ပစ္စည်းမဆို MAC လိပ်စာများကိုထည့်ပါ။ WPA2 key နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် Wi-Fi အင်တာနာကိုမဖယ်ဘဲ Wi-Fi router ကိုတကယ်လုံခြုံပြီ Fi ။ သင့်မှာ Wi-Fi ကိရိယာမရှိဘူးဆိုရင်၊ သင်က antenna ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး Wi-Fi မပါပဲသင်၏ router ကိုဆက်သုံးသည်။
အကယ်၍ သင် MAC address filter ကိုထည့်လိုက်ရင်အခြားသူများ၏ Wi-Fi signal ကိုခိုးယူရန် Beini သို့မဟုတ် BackTrack ကိုအသုံးပြုလိုသူများ၏လမ်းကိုသင်ရလိမ့်မည်။
ပိုကောင်းသေးသည်မှာသင်၏ Iceweasel Aurora ပေါ်ရှိစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ပါ။
အမှန်တရားကတော့ Cisco router များသည်ကျော်ကြားမှုကိုများစွာရစေပြီးအထူးသဖြင့်ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ / ဆော့ဖ်ဝဲများအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါ TP-Links သည်ငွေတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးဟုထင်သော၊ အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော၊ Linux ကိုသယ်ဆောင်။ OpenWRT နှင့် DD-WRT ကဲ့သို့သောအခြား Linux အခြေပြု firmwa များနှင့်ပြုပြင်နိုင်သည်
မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် OpenWRT နှင့်အတူ TP-Link WR740N ကို သုံး၍ ၎င်းသည်အတော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ယခုအချိန်အထိကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောတစ်ခုတည်းသော "ပြproblemနာ" သည် router ကိုချိတ်ဆွဲထားပြီးပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သော torrent connection များတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအပြင်မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါအဲဒီမှာ ၂ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။
၎င်း router သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်သည်။ သို့သော် TP-Link ၏နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များ၏အလယ်အလတ် / အဆင့်မြင့်သောအခြားလမ်းကြောင်းများသို့ ၀ င်ပြီး Wi-Fi ကောင်းမွန်သည်။ Fi လွှမ်းခြုံမှု၊ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီး web terminal ကို telnet မှဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၌ TP-Link W8970 ရှိပြီးအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိပါ၊ ဘယ်သောအခါမျှမဖွင့်၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ Cisco / Linksys ထက်အများကြီးစျေးသက်သာပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းတော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စမ်းသပ်ရန် OpenWRT firmware ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
LAN ip ဖြင့်မရနိူင်သောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားပိတ်ဆို့ထားမည်မဟုတ်ပါ။
José Torres ကိုပြန်ပြောပါ
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် @Jlcmux ။ ငါ့မှာ Ubee (Claro / co) နဲ့ရှိပြီးငါနဲ့တူတူပဲ။ အကယ်၍ သင်ကသီးတောင့်တစ်ခွက်ကိုငွေပေးချေလျှင်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်သူတို့၌ရှိသည်မှာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ ထွက်ခွာရန်မလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ်အတွက်စကားဝှက်ကိုသင်သင်၏ဖြေရှင်းချက်ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ့မလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
ဗစ်တာ Z ဟုသူကပြောသည်
ငါ၌ Ubee (Cablecom-Mexico) ကိုလည်းအသုံးပြုသူအမည်: admin နှင့် password: cableroot ရှိသည်
Ubee က cable-modem ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ configuration တွေအားလုံးနီးကပ်နေမှာပါ။
Victor Z ကိုပြန်ပြောပါ
Spam များကို။ လျောက်ပတ်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိသူသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲသူတိုင်းသည်ဆိုဒ်ကိုနေရာချရန် (သို့) malware ပျံ့နှံ့စေရန်မှတ်ချက်များကို url ဖြင့်ထားခဲ့သည့် bot များရှိကြောင်းကိုသိသည်။ မျက်လုံး။
ထို့ကြောင့် Acquia မှ Dollal မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော Mollom နှင့် (Auttomatic မှ Akismet) ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ / tor မှသို့မဟုတ် web proxy တစ်ခုမှကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုဖွင့်မထားပါက chromium မှ internal ip ဖြင့်သာဖွင့်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်နေတာလား
ငါ Cisco နှင့်ကမ္ဘာ့ကြီးစိုးမှုအလိုရှိခြင်းကိုငါဘယ်လောက်နည်းတယ်။ CCNA နဲ့ Security လေ့လာမှု၊ ငါပြောနေတာကိုငါသိတယ်။
ဒီသော့ကိုမတွေ့မချင်းဒီ cisco နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတိုက်ခဲ့ရတယ်။ "g3sti0nr3m0t4"
ဒါပေမယ့်ဒါက UNE မှာပါ။
မင်းဘယ်လိုအတိအကျလုပ်ခဲ့တာလဲ ငါ့မှာ Cisco ရှိတယ်။ Une သုံးထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဝင်လို့မရဘူး
sddqd rqwwerew ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Cpe04Epm သည် UNE ၏သော့ဖြစ်သည်
sddqd rqwwerew သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ အရမ်းကောင်းတဲ့အကြံကောင်းပါ၊ ဒါပေမယ့်သူထင်တာကအချို့ IP များမှဝေးလံခေါင်သီသောဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ web proxy နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရသောခွေး 8080 ကိုလည်းပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ip modem လက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့မည်သည့်စိတ်ကူး
Luis F ကိုပြန်ပြောပါ
ဟယ်လူးဝစ္စ၊ ကျွန်ုပ်သည် Web Proxy နှင့်ထပ်တူပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ mode သည်၎င်းသည်ကွန်ရက်အတွင်း၌ရှိနေသေးသည်ကိုထောက်ပြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သတ်မှတ်ထားသောပြောင်းလဲနေသောအိုင်ပီဖြင့်ဝေးလံသောကွန်ယက်မှကြိုးစားပြီးဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်။
ငါမှာအတူတူပြproblemနာရှိတယ်။ အခြားအိမ်များမှသော်လည်းကောင်း၊ 3G ဆက်သွယ်မှုနှင့်လည်းကောင်း၊ အခြားအော်ပရေတာများနှင့်လည်းကောင်းအခြားမြို့များမှလည်းကောင်းကျွန်ုပ်မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ အာမခံသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဝေးလံခေါင်သီသောအကူအညီများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်
Juan1 ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါ modem configuration ကိုဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါ့ကို proxy page တစ်ခုထပ်မပေးတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။
tor ကိုသုံးရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အများသုံး ip နှင့် port 8080 မှတဆင့်မဆက်သွယ်ပါ။
အရမ်းကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒါပေမယ့် ip ရဲ့အပိုင်းကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ 8080 plz ထပ်ထည့်တယ်။ ကျွန်တော့်ဝိုင်ဖိုင်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်နီးချင်းတွေကအဲဒါကိုခိုးတာ၊ အကူအညီပေးတာပဲ။
ဒါပေမယ့် IP ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် 8080 ကိုဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး
Compadre၊ ခင်ဗျားဟာပါရမီရှင်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ငါ mapping ports တွေနဲ့ရှုပ်ပွနေမှာပါ ... 🙂
စင်ကာပူမော်ဒန်များသည်ခက်ခဲသောပြCISနာများဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ ဤအရာသည်အမှန်တကယ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအလှူငွေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ !!! !!!!!!!!!!!!!
ကျေးဇူးပြု၍ proxy ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ခဲ့လဲ။
ယနေ့ညကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက် Cisco modem ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနေသည်။ ငါ IP ကင်မရာကို configure လုပ်ရမယ်။ ဖတ်ပြီးတာက ports အချို့ကို unblock လုပ်ရမယ်။
Claro Colombia အတွက် 192.168.0.1 ကို 192.168.100.1 နဲ့အိမ်မှာထားသည့်သုံးစွဲသူများနှင့် Uq-4GIt3M ၏စကားဝှက်နှင့်စကားဝှက်တို့ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ နှင့်အဆင်သင့်
rich67801 ကို Reply
ကျွန်ုပ်သည်အစတွင်မတတ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့် pc မှအဆင့်မြင့်ဆက်တင်များကိုခွင့်မပြုပါ၊ သို့သော်ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်၏ android မှ Dolphin Browser ဘရောက်ဇာကို Router ၏လိပ်စာဖြင့်သာအသုံးပြုပါသည်။ (Claro ကိုလံဘီယာ)
၎င်း modem များကိုရယူရန် UNE မှမည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသင်အသုံးပြုမည်ကိုသင်သိပါသလား။
(သို့) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် hard reset လုပ်လျှင်တယ်လီဖုန်းလိုင်း၏စီစဉ်မှု (တစ်ခုခုကိုလည်းဒီ modem မှကြီးကြပ်သည်) ဖြစ်လိမ့်မည်။
proxy ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ၊ proxies များရှာပြီးရရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ default gateway ကိုထည့်ပြီး ၁၀.၅.၀.၁ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ငါ့ကိုမပေးသည်။ ထိုအခါငါ ၁၀.၅.၀.၁ ကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားသည်။ စကားဝှက်နှင့်သုံးစွဲသူဖြစ်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားမပေးခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် "setup" လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်လက်လှမ်းမှီနိုင်ခြင်းမရှိပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်၏သတ္တုတွင်းဆာဗာအတွက်တည်ဆောက်မှုကိုတည်းဖြတ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ 😀
ရှင်းလင်းဖို့အတွက် ... ကျွန်တော့် router (သို့) modem (သူတို့ခေါ်သမျှ) xD ရှင်းပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကို UNE Model Cisco DPC2425 ၏ Modem တစ်ခုကို ၀ င်ရန်ကူညီပါမလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် VTR (ချီလီ) မှ Cisco DPC2425R2C တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၅ တွင်ရှင်းလင်းသော key modem
အသုံးပြုသူ - home
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ၀ ိုင်ဖိုင်ပိတ်ထားရန်ယခု ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်
သင် port တော့မရနိုင်တော့ဘူး
မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလဲ၊ ကျွန်တော့်မှာ Movistar router (OBSERVE) မပေါ်ခင်မှာ Cisco DPC2425 cable modem ရှိတာပေါ့။ ဒါကြောင့်အဲဒါကို wifi signal အတွက် repeater အနေနဲ့ထားဖို့၊ အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့၊ gateway ကိုပြောင်းလဲဖို့၊ dhcp ကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတဲ့အရာကလက်ပတ်နာရီကို Cisco နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ နောက်တစ်ခုက restart ပြန်လုပ်တာဖြစ်ပြီးကြိုးမဲ့ network ကိုသာ deconfigured လုပ်တယ်။
Stephen Bermudez ဟုသူကပြောသည်
Remote Access ကိုပိတ်ထားပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအနည်းငယ်သာမိတျဆှေဖွဲ့သတ္တိကျေးဇူးတော်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့
Esteban Bermudez အားပြန်ပြောပါ
ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။ ငါနဲ့အတူတူပါပဲဖြစ်ခဲ့တာ၊ ပြန်လည်စတင်မှုကမထိုက်တန်ဘူး
Angela vasquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ router ကို configure လုပ်ရန်မည်သည့်စာမျက်နှာကို ၀ င်ရောက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားလိုပါသည် ငါ cisco.com ထည့်ပြီး၊ အခြားစာမျက်နှာတစ်ခုကို configuration ကိုပြောင်းရန်မဟုတ်ဘဲသင့်စာမျက်နှာသို့လာရောက်သည့်အခါမဟုတ်။ သငျသညျယခုငါ့ကိုဖြေဆိုပါကငါအများကြီးတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
angela vasquez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်မှာ Cisco WiFi router ရှိတယ်၊ စကားဝှက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး
ငါ့မှာ ၀ င်းဖိုး Routerial 10820c65243904 Cisco အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုမပြောင်းနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် costarica pogon မှမည်သည့်လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသည်၊ ၁၉၂.၁၈.၃.၁ ထည့်သွင်းထားသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲရန်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ cisco - dpc2425 router ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဒီ router ကို repeater mode နဲ့ configure လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အခြား router တစ်ခုကနေ WIFI ကတဆင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး။ အရင်ကငါ admin user အဖြစ်ထည့်ခဲ့ဖူးပြီးစကားဝှက်အလွတ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခု router ကိုငါမဝင်တော့ဘူးငါပီရူးကပါ
Vic P ဟုသူကပြောသည်
ဒီ modem အတွက်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှု parameters တွေကို configure လုပ်လို့ရမလား။
ငါတယ်လီဖုန်းလဲလှယ်ဖို့ချိတ်ဆက် analog port များနှင့်အတူ Cisco သည် DPC2425 modem ရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ modem က cut-off tones (onhook) ကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်လိုင်းပေါ်တွင်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Vica P ကိုစာပြန်ပါ
Pedro အီး ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ cisco dpc 2425 modem ရှိတယ်။ အကယ်၍ ငါ 20 မှ 30 Megas ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့တူတူတူ modem လုပ်မှာလား။
Pedro E. သို့ပြန်သွားရန်
စံ access ကို: 192.168.0.1
စိတ်တိုင်းကျ access ကို: 192.168.1.1
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ L သည် port ပြproblemနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေသည်
အဲဒါကငါ့ကို ၀ င်ခွင့်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် NAT သို့မဟုတ် DMZ ကိုဖွင့်တဲ့အခါငါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဝေးကနေကြည့်လို့မရဘူး။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုမှာရှိတဲ့ function တစ်ခုခုကို disable လုပ်ခြင်းက public ip ကိုမပေးပဲအဝေးကနေဝင်ခွင့်ရလားမသိဘူး။ မည်သူမဆိုယင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိပါသလော။
hahahaha ပါရမီက Uq-4GIt3M: V: V နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်
Wordpress 3.6 သို့မကွာခဏအကြုံးဝငျပါမညျ
Debian, Ubuntu သို့မဟုတ်အနကျအဓိပ်ပါယျနောက်ဆုံးဗားရှင်း Choqok (compiling) ကို install လုပ်နည်း